Madaxweynaha Somalia oo u digay Madaxda Puntland iyo Gal-Mudug – Radio Daljir
Madaxweynaha Somalia oo u digay Madaxda Puntland iyo Gal-Mudug
Diseembar 3, 2015 6:40 b 0
Somalia, December 03, 2015-(Daljir)_Â Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa nasiib darro ku tilmaamay dagaalka dib uga qarxay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, ee u dhexeeya maamullada Galmudug iyo Puntland.
â€œWaa nasiib darro in la xushmeyn waayo ballanqaadkii shaley ay madaxda Puntland iyo Galmudug ku galeen Gaalkacyo ee ahaa in dagaalka la joojiyo, nabaddana laga shaqeeyo. Waxaan maamullada iyo madaxda Puntland iyo Galmudug xusuusinayaa in uu dhammaadey waqtigii isla xisaabtan laâ€™aanta, dhiigga shacabka ee daadanayana cawaaqibkeeda la dhadhamin doonoâ€™â€™.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya ay horyaallaan hawlo badan oo u baahan in si wadajir ah loo wajaho, isla markaana dagaal dambe oo sokeeye aan la aqbali karin in shacabka lagu mashquuliyo.
Waxaa uu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intaa ku darey in khilaaf kasta oo dhaca uu ku qurux badan yahay in wadahadal lagu xaliyo, Soomaaliyana ay ka gudubtey xilligii qoriga wax lagu xalin lahaa.
â€œDowladda Federaalka ee Soomaaliya waxaa ka goâ€™an mar walbana ay sii wadeysaa dadaalka ku aaddan in xasaradda ka taagan Gaalkacyo nabad lagu xaliyo. Waxaan mar kale farayaa madaxda Puntland iyo Galmudug inay si buuxda ula shaqeeyaan Raâ€™iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaâ€™arke iyo masâ€™uuliyiinta kale ee dowladda ee hawlaha dhexdhexaadinta ku guda jiraâ€™â€™, ayuu yiri Madaxweynaha.
Waxaa uu ugu dambeyn Madaxweynaha ugu baaqey hoggaamiyeyaasha Galmudug iyo Puntland, Cabdikariim Xuseen iyo Cabdiweli Maxamed Cali inay u hoggaansamaan, si buuxdana u fuliyaan heshiiski shaley lagu kala saxiixday Gaalkacyo.
Kaamiroon oo Weerar ku Dishay Dagaal-yahanno ka tirsan Boko-Haram
Gal-Mudug oo Madaafiic ku soo weerartay Puntland iyo dowladda ka hortagtay